Isengezo sokunwetshwa kwe-China Concrete, umphakeli oqondile wasefekthri, umphumela omuhle Ukukhiqiza kanye Nemboni | I-Fluffier
Usekelo lobuchwepheshe ku-inthanethi, LUTHO
Isixazululo esiphelele samaphrojekthi, Abanye
ukhonkolo ukunwetshwa izithasiselo
I-ejenti yokwandisa ukhonkolo ye-PN-4 iyi-ejenti yokwandisa yohlobo lwe-U, engashintsha isakhiwo sangaphakathi sikakhonkolo, ukuthuthukisa ukumelana nokuqhekeka nokungagxili kukakhonkolo, ukuze kuncishiswe i-shirnkage ngesikhathi senqubo yokuqinisa ukhonkolo. Ukhonkolo onxephezela i-shirnkage ungasetshenziswa ezinkathini ezahlukene zokwakha ngokusebenza okuhle komsebenzi, ukukhula okuzinzile kwamandla esikhathi eside, kodwa ngaphandle kokugqwala emigoqweni yensimbi, engavimbela ukusabela kwe-alkali aggregate ukuze kuthuthukiswe ukuqina kukakhonkolo.
Inani elihlanganisiwe le-RN-4 livamise ukuba ngu-8-10% ngokususelwe ekuhlanganiseni kwangaphakathi (ukushintshwa kwesilinganiso sezinto zikasimende). Ifaneleka kumasimende e-portland ahlukahlukene futhi ingasetshenziswa ngokuhambisana nezinye izixube, kodwa kufanele inqunywe ngemva kokwakhiwa. Isikhathi sokuxuba sikakhonkolo we-RN-4 kufanele sinwetshwe ngamasekhondi angama-30-60, ngephutha lomthamo lingaphansi kuka-0.5%. Ngemuva kwamahora angu-12-24 wokuqina kokhonkolo we-RN-4, ukuchelela nokwelapha kufanele kwenziwe okungenani izinsuku ezingu-14. Akuvunyelwe ukusetshenziswa endaweni yokusebenza enezinga lokushisa elingaphezu kwama-80 degrees. Uma izinga lokushisa lokwakha lingaphansi kwama-degree angu-5, izinyathelo zokufakelwa kufanele zithathwe.
Ukusebenza Okuyinhloko Kwezobuchwepheshe: Ngaphansi komthamo othize, amandla aphelele namandla aguquguqukayo aphakeme ngo-10-30% kunalawo okhonkolo wesithenjwa ezinsukwini ezi-3, izinsuku eziyi-7, nezinsuku ezingama-28, futhi amandla sekwephuzile ayaqhubeka nokukhula. Ngemva kokufaka i-ejenti yokwandisa eyinhlanganisela ye-RN-4, inkomba yokungafinyeleli yekhonkrithi izikhathi ezingu-1-2 zekhonkrithi yereferensi. Ngemuva kokuthi inkomba ye-impermeability S ngaphezu kwe-30 ifakwe ku-ejenti yokwandisa eyinhlanganisela ye-RN-4, ukhonkolo uzoba nokusebenza okuhle kokusebenza kanye nokulahlekelwa okuncane kokuwohloka.
Okwedlule: I-Accelerator Yekhwalithi Enhle Kakhulu, Umphumela Omuhle
Olandelayo: Isengezo sokunwebeka esiwukhonkolo, ibanga eliphezulu, isampula etholakalayo, amakhemikhali aluhlaza
Isengezo sokunwetshwa okukhonkolo, ibanga eliphezulu, isampula ...